सन्दीप लामिछानेलाई नखेलाउदा दिल्लीको सपना भयो यसरी चकनाचुर.::Leading Nepal News
सन्दीप लामिछानेलाई नखेलाउदा दिल्लीको सपना भयो यसरी चकनाचुर.
बैशाख २८, काठमाडौ । ओपनर फाप डुप्लेसिस र शेन वाट्सनले अर्धशतकीय पारी खेलेपछि दिल्ली क्यापिटल्सलाई ६ विकेटले पराजित गरी चेन्नई सुपर किंग्स इण्डियन प्रिमियर लिग आईपीएलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । उपाधिका लागि चेन्नईले आइतबार मुम्बई इण्डियन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । पहिलो क्वालिफायरमा मुम्बईसँग नै हारेपछि चेन्नईले दोस्रो क्वालिफायर दिल्लीसँग खेल्नुपरेको हो । यी दुई टोलीले अहिलेसम्म तीन तीन पटक आईपीएल जितेका छन् । मुम्बईले २०१३, ०१५ र १७ मा उपाधि जितेको थियो भने चेन्नाईले सन् २०१०, ०११ र ०१८ मा उपाधि जितेको थियो ।
विसाखापट्टनममा भएको दोस्रो क्वालिफायरमा १४८ रनको लक्ष्य चेन्नईले १९ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर भेट्टायो । ओपनर डुप्लेसिस र वाट्सन दुवैले समान ५० -५० रनको पारी खेले । डुप्लेसिसले ३९ बलमा ७ चौका र १ छक्का प्रहार गर्दा वाट्सनले ३२ बलमा ३ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । चेन्नईका लागि सुरेश रैनाले ११ र कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले ९ रन जोडे । अम्बाती रायडु २० रनमा अविजित रहे ।प्रतियोगिताका सर्वाधिक विकेट लिने बलर कागिसो राबाडा विश्वकपको तयारीका लागि स्वदेश फर्किएपछि दिल्लीको बलिङ एकाएक कमजोर बनेको थियो ।यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १४७ रनको स्कोर खडा गरेको थियो । राम्रो सुरुआत गर्न नसकेको दिल्लीका लागि पाँचौं नम्बरमा ब्याटिङमा आएका ऋषभ पन्तले सर्वाधिक ३८ रन जोडेका थिए । पन्तले २५ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
दिल्लीका लागि कोलिन मुनरोले २७, शिखर धवनले १८, कप्तान श्रीयास आयरले १३, शेरफान रथरफोर्डले १० रन जोडेका थिए । अन्तिम ओभरमाको अन्तिम दुई बलमा छक्का र चौका प्रहार गरेका इशान्त शर्माले पनि १० रनको योगदान गरेका थिए । दिल्लीका ५ खेलाडीले दोहोरो अंकको रन छुन सकेनन् । सन्दिप लामिछानेलाई बाहिर राखेर र किमो पावललाई खेलाउने निर्णय दिल्लीका लागि सबैभण्दा टाउको दुखाइको विषय बन्यो । किनकी उनले मात्र ३ ओभरमा विना विकेट ४९ रन दिए । जसले गर्दा चेन्नई सुपर किंग्सले ६ बल अघिनै खेल जित्यो । किनकी हिजोको खेलको पिच स्पिन बलरलाई फाइदा पुग्ने खालको थियो । जसको फाईदा दिल्लीले लिन नसक्दा आईपीएलको फाइनलमा पुग्ने सपना चकनाचुर भयो । नेपाली युवा स्टार सन्दीप लामिछाने अनुबन्धित टोली दिल्ली क्यापिटल्सको पहिलो पल्ट फाइनलमा पुग्ने लक्ष्यमा चेन्नई बाधक बन्यो । चेन्नई भने योसँगै आईपीएलमा ८औँ पटक फाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।योसँगै सन्दीपका लागि पनि आईपीएल यात्रा यो सिजनका लागि सकिएको छ । यस सिजन सन्दीपले ६ खेल खेलेर ७ विकेट लिए । अघिल्लो सिजन ३ खेलमा ५ विकेट लिएका सन्दीपले आईपीएलमा अहिलेसम्म १२ विकेट लिएका छन् ।